R/wasaare Gaas oo dib u magacaabay wasiirka cusub ee wasaaradda haweenka iyo m/weyne Shariif oo aqbalay. – Radio Daljir
Muqdisho, July 27 ? Wareegto ka soo baxday saaka xafiiska R/wasaaraha Soomaaliya Prof. Cabdiweli Maxamed Cali ?Gaas? ayaa Marwo Maryan Aweys Juma, lagu magacaabay wasiirka wasaaradda haweenka iyo hormarinta arrimaha qoyska Soomaaliya.
Magacaabidda R/wasaare Gaas uu magacaabay wasiirka haweenka ayaa ka dambaysay kaddib markii laga xog iyo xaal waayey wasiirkii hore ee wasaaraddaasi loo magacaay maalmo ka hor Marwo Caasho Cismaan Caqiil, inkastoo wararka qaar tilmaamayaan in ay ka cudur-daaratay qabashada xilkaasi loo magacaabay.
R/wasaaraha, ayaa warqadda magacaabidda wasiirka haweenka u gudbiyey isla saakaba m/weyne Shariif Sh. Axmed taasoo la tilmaamayo m/weynuhuna in uu aqbalay magacaabidda wasiirka cusub.
Wasiirradda maanta la baddalay waxaa ay markii la magacaabay ku sugnayd magaalada Jawhar ee xarunta gobolka Sh/dhxe sida dad xog-ogaal ahi Radio Daljir u xaqiijiyeen halkaasi oo ay ku lahayd goob caafimaad, waxaana Jawhar maamula ururka Al-shabaab oo muddo badan gacanta ku hayey.
20-kii bishaan aynu ku jirno ayey ahayd markii R/wasaaraha Gaas uu magacaabay 18 wasiir oo ay ku jirtay wasiirka maanta la baddalay, kuwaasi oo iyaga iyo 27 xubnood oo iskugu jira wasiirro-ku-xigeenno iyo wasiiru-dawlayaala maalmo ka hor mudanayaasha baarlamaanka cod-aqlabiyad ah ah ku ansixyeen.